ब्लग बनाइ चल्तीको स्थितिमा ल्याउने र उपयुक्त मुल्यमा बेच्न पाउँदा आनन्द लाग्छ-सुरेश खनाल - MeroReport
ब्लग बनाइ चल्तीको स्थितिमा ल्याउने र उपयुक्त मुल्यमा बेच्न पाउँदा आनन्द लाग्छ-सुरेश खनाल
झट्ट हेर्दा अप्ठ्यारो र बुझ्न कठिन हो कि झैँ लाग्ने तर सुचना प्रविधि, शिक्षा र ब्लगिङबारे अत्यन्तै उपयोगी जानकारी राखिएका http://bivori.com, http://psexam.com जस्ता ब्लगका ब्लगर हुन सुरेश खनाल । पोखरामा जन्मिएर काठमाण्डौमा हुर्किएका सुरेश आफुलाइ सरल र सहयोगी मान्छे मान्दछन् । ब्लग र ब्लगिङमै धेरै समय बिताउने उनी यसलाइ सर्चइन्जिन मैत्री गराइ प्रचलित बनाउने र त्यसैको माध्यमबाट जिविकोपार्जन गर्ने अभिलाषा पनि राख्छन् भलै उनको स्नातक अँग्रेजी साहित्य र गणीतमा भएपनि । ब्लगिङ, कम्प्युटर र सुचनाप्रविधिको ज्ञान लिने तीब्र लालसाले उनलाइ उच्चशिक्षा सुचनाप्रविधिका बिषयमा लिन अभिप्रेरित गर्‍यो । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै सुरेश खनालसंग ब्लगिङ र ब्लगमार्फत आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सुरेश खनालसंगको कुराकानी :
ब्लगर हुँ भनेर दावी गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेँ जस्तो लाग्दैन तर केही ब्लगिङ सिकेँ । ब्लग वास्तवमा के रहेछ¸ यसका निर्माण पक्ष¸ प्रोमोशन पक्ष¸ अप्टिमाइजेशनहरु र ब्लगले खोल्ने विभिन्न अवसरका ढोकाहरुका बारेमा परिचित हुन पाएँ । अब छिट्टै नै एउटा ब्लगरको रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गराउन सक्षम हुनेछु भन्ने विश्वासमा छु ।
तपाँइले चलाउने ब्लगहरु तिनवटा भेटिए। http://bivori.com, www.Sureshkhanal.com र www.icttrends.com । तीनतीनवटा ब्लग किन?
SureshKhanal.com उल्लेख गर्नुभयो । वास्तवमा यो अहिलेसम्म पुर्णरुपमा तयार भैसकेको छैन । छिटै नै यसलाई कुन प्रयोजनमा उपयोग गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछु । आफु जहाँ छ त्यस वरीपरीका बारेमा बढी जानिन्छ र ती विषयवस्तुहरु नै महत्वका लाग्छन् । कम्प्युटर विज्ञान पढ्दाका अवस्थामा यस सम्बन्धमा ज्ञान बाँड्ने जोश थियो । नेपालमा कम्प्युटर अपरेटर परीक्षा तयारी गरिरहेकाहरुलाई पाठ्यक्रमसँग नजिक रहेर सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने मनसायले PSExam साइटको शुरुवात गरेँ । यो साइट नेपाल भन्दा पनि बाहिर राम्रो चल्यो¸ गुगलको विज्ञापनहरुबाट राम्रै आर्जन गर्न थाल्यो । तर पाठकहरु नेपाल बाहिरका भएपछि यसमा प्रकाशित लेखहरु पनि त्यस अनुकुल परिवर्तन हुँदै गए । शायद त्यतिखेर नेपालमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर परीक्षाको तयारी गर्नेहरु नै थिएनन् ।
फेसबुकको प्रचलन पश्चात् विस्तारै कम्प्युटर अपरेटरका प्रतियोगीहरु सम्पर्कमा आउन थाले र सामग्रीको बारेमा खोजतलास गर्न थालेपछि छुट्टै ICTTrends नाममा अर्को साइट खोलेँ ।
Bivori मा चाहीँ ब्लगिङ¸ सोसल मिडिया¸ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेशन¸ अनलाईन मनि मेकिङ जस्ता विषयवस्तुमा आफुले भोगेका¸ देखेका र सिकेका कुराहरु प्रस्तुत गर्छु । अरु पनि केही साइटहरु बनाएँ¸ कुनै परीक्षणका निम्ति र कुनै एफिलिएट मार्केटिङका निम्ति । ती सबै उल्लेख गर्न आवश्यक लाग्दैन ।
वास्तवमा ब्लगिङ नै भनेर शुरु गरिन¸ पछि थाहा भयो ब्लगिङ रहेछ । त्यति बेला नेचर बोर्डिङमा कम्प्युटर विज्ञान पढाउँथे । अनिश सरले नाइट्रोक्लिक्सबाट डलर कमाउनु हुन्थ्यो । नेपाल भित्रै बसेर विदेशी मुद्राको आर्जन? पक्कै चाखलाग्दो भयो । धेरै लामो टिकेन । नाईट्रोक्लिक्स¸ तर यसले मलाई अनलाईन मनी हुन्छ भन्ने दरिलो प्रमाण दियो र म यस सम्बन्धमा खोजी गर्न थालेँ । फसेँ पनि¸ आर्टेक्स नेपालले रजिष्ट्रेशन शुल्क भनेर ३० हजार खाएर भाग्यो । खुशी लाग्यो¸ मैले महँगोमा एउटा ज्ञान पाएँ । त्यसपछि मलाई कसैले यसरी ठग्न सकेन ।
खोजीको सिलसिलामा गुगलको विज्ञापन र कन्टेन्ट बेस्ड साइटहरुको बारेमा सिकेँ । केही साइटहरु बनाएँ¸ परीक्षण गरेँ¸ विफल भए¸ तीनलाई हटाएँ । पाठकहरुलाई उपयोगी हुने सामग्रीहरु नभएसम्म कुनैपनि साइट लामो चल्न सक्दैन भन्ने ज्ञान पाउन लामै समय खर्चिएँ ।
यति भएपछि ब्लगिङ तिर लागेँ र विगत छ वर्षदेखि निरन्तर छु । आजकाल ब्लगहरु बनाउने¸ तिनलाई चल्तिको स्थितिसम्म ल्याइपुर्‍याउने र उपयुक्त मुल्यमा बेच्ने गर्छु¸ आनन्द लाग्छ ।
अहिले त उद्देश्य शुन्य ! एउटा लत बनेको छ । केही भएपनि नभएपनि ब्लगिङ जरुरी झैँ भएको छ । तर ब्लगका बहुआयामहरु छन् । ब्लगिङ केका लागि गर्छु भन्दा सबै समेट्न गाह्रो छ । तर इमान्दारिताका साथ भन्दा ब्लगिङ शुरु गरेको अनलाइन मनिका लागि नै थियो । बिस्तारै छिप्पिँदै गएपछि अनुभूत हुँदोरहेछ¸ उद्देश्य अरुनै केही हुनुपर्छ र आर्जन स्वतः स्वभाविक रुपमा हुँदोरहेछ । जबसम्म पैसा कमाउनका लागि भनेर काम गरिरहेँ¸ पटक्कै कमाइएन । अरुलाई मद्दत गर्ने र उपयोगी सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने तर्फ उद्देश्य मोडिए पछि धेरै कुराहरु लाईन लागेर आउँदा रहेछन् ।
Bivori मा नयाँ ब्लगरहरु र ब्लगिङ गर्न चाहनेहरुका लागि उपयोगी हुने कुनैपनि विषयवस्तुहरु समेट्न मन पराउँछु । अब नयाँ ब्लगको लागि टुरिजम विषय रोज्ने सोचमा छु ।
प्रतिदिन हजारौ नयाँ ब्लगहरु बन्छन् र त्यति नै संख्यामा बन्द पनि हुन्छन् । ब्लग निरन्तर नहुनुमा मेरै जस्तै दोष अरुमा पनि छ जस्तो लाग्छ । अरुले ब्लगिङ गरेर पैसा कमाएका छन् रे भनेको सुनेर ब्लग बनाउन रहर गर्नेहरु प्रशस्त छन् । ब्लगिङ गरेर नाम कमायो भनेर ब्लगिङ शुरु गर्नेहरु पनि छन् । तर शुरुमै आवश्यक ज्ञानको अभाव¸ दुःख व्यहोरेर निरन्तर लागिगरहने निष्ठा र एउटा विशाल धैर्यको अभावमा छिटै ब्लगहरु त्यागिएका छन् । एउटा उच्चाइमा पुगेपछि¸ वास्तवमा ब्लगिङ एउटा स्वतन्त्र र सहज विधा हो । तर समय चाहीँ¸ पक्कै दिनै पर्ने हुन्छ ।
मलाई सहज यात्रा मन पर्छ । सबै साथीहरुको समय मिल्यो भने १¸२ दिनको समय निकालेर कतै घुम्न हिँडिहाल्न उचालिन्छु । गजल सुन्न पनि¸ अनि प्रत्येक शेरमा वाहऽऽ वाहऽऽ भन्न मन पर्छ । आजकाल नेपाली गजलहरु पनि स्तरीय र मनछुने खालका आएका छन्¸ खुशी लाग्छ ।
भर्खरको शुरुवात हो¸ हामी थोरै आलाकाँचा नै छौँ । ठूलो शक्ति प्राप्त भएपछि ठूलो जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ भनिन्छ¸ हामीमा दोश्रो पक्ष अलि कम भएझैँ लाग्छ । सोसल मिडियाका फाइदाहरु अकल्पनीय छन्¸ हामी अझै पनि हल्का जोक्स् र सस्ता सेक्स चाटेर समय विताउँदैछौ । पँधेरे गफमा मात्र फेसबुकमा धेरै समय खर्चेका छौँ । तर स्थिति सँधै त्यस्तो हुने छैन¸ अनि धेरै मानिसहरु सोसल मिडियाको राम्रो उपयोग गरिरहेको पनि देखेको छु । सुनिता गिरीले सोसल मिडियाको प्रयोगबाट नै आफुलाई सक्षम लेखिकाको रुपमा उभ्याइसकिन् । गणेश कार्कीले फेसबुकको माध्यमबाट नै आफ्नो ब्लगको राम्रो प्रचार गर्छन्¸ उनको मुख्य ट्राफिक सोर्स नै फेसबुक बनेको छ । त्यस्तै मैले थुप्रै विद्यार्थीहरु अनि कम्प्युटर अपरेटरका प्रतियोगीहरुलाई फेसबुकमै चिन्दछु र उनीहरु त्यसैबाट तयारी गर्दैछन् । हामी उपयोग गर्न सिक्दैछौँ ।
हरेक कुराको दुबै पक्षहरु हुन्छन् र प्रत्येक साधनको सदुपयोग पनि र दुरुपयोग पनि । ब्लगिङको कुरा गर्दा कसैले दुरुपयोग गर्न भ्याइसके जस्तो मलाई लाग्दैन तर हामी अझै यसको समुचित सदुपयोग गर्न जान्ने भैनसकेको हो की जस्तो लाग्छ । इन्टरनेटको सहज उपलब्धता र यसबारेको प्रचारप्रसार हुँदै गएपछि निकट भविश्यमा नै नेपाली ब्लगका प्रयोगकर्ता बढ्ने र यसको उपयोगमा बृद्धी हुने आश गर्छु ।
पढ्छु¸ निक्कै पढ्छु । प्राय: त म ब्लग कसरी अझ उन्नत बनाउने भन्ने विषयमा नै पढ्छु । अनि यस क्षेत्रमा भैरहेका नयाँ नयाँ प्रयोगहरु¸ उपलब्ध नयाँ टुलहरुको बारेमा बढी चासो लाग्छ । रामसेको BlogTyrant, जोस्टको Yoast, इलिनको BasicBlogTips, हार्स अग्रवालको ShoutMeLoud मेरा सूची अन्तर्गतका केही ब्लगहरु हुन् । अनिलजीको Akarpost, दिनेशजीको Wagle Street Journal, अनि गणेशजीको PaniPhoto प्राय पढ्छु । OnlineKhabar जस्ता केहीसाइटहरु त पर्ने नै भए ।
हाम्रो समाज¸ सभ्यता र नागरिकहरुको जिम्मेवारी बोधले धेरै कुरा निर्धारित हुनु पर्ने हो । मैले अघि नै भनिसके झैँ ठूलो शक्ति प्राप्त भएपछि जिम्मेवारी बोध पनि ठूलै हुनु पर्ने हो । तर परिपक्व नभैसकेको स्थितिमा केही नियमहरुले दिशानिर्देश गर्छन् भने स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ ।
स्तरीय र प्रचलित ब्लगहरु त मर्यादामा केही उन्नत नै पाउँछु । तर केही परीक्षणका ब्लगहरु¸ केही छटपटिएका दिमागका उपजहरु र केही हतारिएका मनहरु भने के गर्न हुने के नहुने सबैथोक बिर्सेर एकाङ्की भएको देख्दा दिक्क लाग्छ । अर्को पाटो भने आशलाग्दो छ । हालैका दिनहरुमा फेसबुकमा छ्यापछ्याप्ती शेयर गरिएका अश्लिल सामग्री सहितको ब्लगहरुको सफाइ अभियान नै चल्यो । आजकाल हलुका भएको छ । इकोसिस्टम बन्न लागेको झै मानेको छु ।
ब्लगका सामग्री त होइन नामसँग चाहीँ एउटा रमाइलो भयो । मैले Public Service Exam भनेर PSExam डोमेन नाम दर्ता गरे । केही समय पछि थाहा पाएँ प्राय फयरवालहरुले मेरो साइटलाई ब्लक गरेछन् । कारण खोज्दै जाँदा साइटको नाममा sex शब्द परेको रहेछ (pSEXam) । डोमेन नेम किन्दा यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने रहेछ ।
त्यस्तै मैले ICT Trends मा प्रकाशित गरेको केही पेजहरु हुबहु कपि गरेर एउटा ब्लगस्पोट ब्लगमा प्रकाशित गरेको पाएँ । उक्त सामग्रीहरु मेरो आफ्नो भएको र तीनलाई या त हटाउनु या श्रोत खुलाउनु भनेर इमेल पठाएकोमा उक्त व्यक्तिले सकेको गर भनेर रिप्लाई गर्‍यो । मैले गुगलमा DMCA कम्प्लेन गरिदिएँ । भोलिपल्ट त्यो ब्लग गुगलले हटाइदिएछ¸ उसले मलाई थर्काएर इमेल पठाएथ्यो ।
फेसबुकको प्रचलन व्यापक छ¸ सबै तरिकाले । ट्वीटरका बारेमा अझैसम्म खासै चासो भेटिँदैन । केही नेपाली पत्रकारहरुले रामै प्रयोग गरेको पाएँ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले खोलेको खाताका कारण नेपालीहरु पनि ट्वीटरको बारेमा केही जानकार भएका थिए ।
इन्टरनेटको उपलब्धता र स्मार्ट फोनको व्यापकता सँगै ब्लगहरु बढी प्रयोगमा आउनेछन् जस्तो लाग्छ । अहिले त शुरुवातकै स्थिति हो ।
छन् । रेडियो¸ टिभी जस्ता स्थापित माध्यमहरुले केवल राजनैतिक घटनाहरुलाई मात्र विषयवस्तु बनाएकोमा आजकाल मानिसहरुको अन्य पक्षका लागि ब्लगहरुमा ध्यान बढी जान थालेको छ । ब्लगरहरु र पब्लिशरहरुले पनि यस कुरालाई ख्याल गरेर सामाजिक हितमा जोड दिनु अँझ उत्तम हुनेछ ।
काठमाडौमै पनि प्रर्याप्त कहाँ छन् र ? शुरुवात हो¸ छिटै मोफसलमा पनि यसको प्रभाव बढ्ने छ । केही नयाँ साथीहरुले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको बारेमा ब्लगिङ थाल्नु भएको छ ।
ब्लगिङ के-के हो भनेर सोच्नु भन्दा ब्लगिङ के चाहीँ हैन भनेर भन्न सजिलो हुने भैसकेको छ । नागरिक पत्रकारिताको रुपमा ब्लगिङ लामो समय देखि प्रचलित छ । आफ्नो मालिक आफैँ भए पछि¸ अरुले प्रकाशन गर्न नमान्ने लेखहरु पनि ब्लगमा प्रकाशित भएका छन् । कतिपय रिसर्चहरुका लागि यी सामग्री पक्कै उपयोगी हुन् ।
छोटो समयमा नै मेरोरिपोर्टले हाँसिल गर्न सकेको लोकप्रियता तारिफयोग्य छ । सामाजिक जिम्मेवारी प्रति सचेत रहेर थालिएको यो प्रयासले नेपाली समाज र नेपालका पत्रकार तथा ब्लगरहरुको आफ्नै समुदाय बन्न सफल भएकोमा बधाई दिँदै यसको स्थायीत्व र प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु । साथै साताको ब्लगरका रुपमा प्रस्तुत भई आफ्ना कुरा राख्‍ने मौका दिनुभएकोमा आभारी छु ।
Comment by Sabin Pravat on July 6, 2013 at 2:32pm
ल हार्दिक बधाई...
Comment by pawan neupane on July 3, 2013 at 6:06pm
Congratulation Suresh Ji :)